Duulimaadku wuxuu bilaabmayaa Ogosto: Seychelles waxay diiwaangelisaa lambarada imaanshaha booqdaha oo aad u fiican
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Duulimaadku wuxuu bilaabmayaa Ogosto: Seychelles waxay diiwaangelisaa lambarada imaanshaha booqdaha oo aad u fiican
Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Wararka Faransiiska • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Israa’iil Wararka Jebinaya • News • Wararka Ruushka • Sacuudi Carabiya Warka • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta • Wararka kala duwan
Lambarada booqdaha Seychelles
Calaamadeynta taariikh kale oo muhiim u ah sannadka, iyo bilowga duullimaadka ilaa Ogosto, ujeedka jasiiraddu wuxuu si rasmi ah u garaacay baarka 80,000 oo soo -booqde ah, taas oo ah astaan ​​wanaagsan oo soo kabasho u leh warshadaha dalxiiska ee Seychelles.
Markay safarku dib uga bilowdo Yurub, daneeyayaasha maxalliga ah ee ku wajahan jasiiradda Badweynta Hindiya waxay ku rajo weyn yihiin inay arkaan kor u kaca booqdayaasha suuqyadooda ilaha dhaqameed ee Galbeedka Yurub.
Toddobaadkii 37 ee 2021, diiwaangelin 9,000 oo booqde ayaa lagu xusay meeshii la aaday.
6 -da suuq ee ugu sarreeya Seychelles sannadka illaa Ogosto 15, 2021, waa Russia, UAE, Israel, Germany, France, iyo Saudi Arabia.
Iyada oo la tiriyo tiro la yaab leh oo ah 10,413 booqdayaal 2 toddobaad gudahood, Seychelles waxay heshay booqashadeedii 76,737th sannadka 8 -dii Agoosto, 2021, iyo booqashadeedii 82,026 -kii bishii Ogost 15,2021, iyadoo 96% dadkii yimid, la duubay wejigii ugu dambeeyay dib u furista dalxiiska bisha Maarso 2021.
Intii lagu gudajiray usbuuca 37 ee 2021, diiwaangelin 9,000 oo booqdeyaal ah ayaa lagu xusay halka loo socdo, kaliya kun ayaa ka yar celceliskii hore ee cudurka faafa ee hore 2019.
5,289 booqde ayaa ka degay gudaha Seychelles inta lagu gudajiray usbuuca labaad ee Ogosto 2021 iyada oo si weyn kor ugu kacday Faransiiska, iyadoo 807 booqdeyaal ay kor u qaadeen imaanshaha inta lagu jiro usbuuca Ogosto 9 illaa 15, 2021.
Maaddaama safarku dib uga bilaabmayo Yurub oo waddammaduna ay dabcinayaan xannibaadaha safarka, daneeyayaasha maxalliga ah ee ku sugan jasiiradda Badweynta Hindiya waxay ku rajo weyn yihiin inay arkaan kor u kaca tirada booqdayaasha suuqyadooda ilaha dhaqameed ee Galbeedka Yurub.
Marwo Sherin Francis, Xoghayaha Guud ee Dalxiiska, ayaa sheegtay in tirooyinka hadda jira ay aad u dhiirri -gelinayaan, maadaama ay ka tarjumayaan saadaasha ay sameeyeen Dalxiiska Seychelles bilowga sanadka si loo helo inta u dhaxaysa 111,000 iyo 189,000 booqdayaasha 2021.
“Baahida safarka ayaa weli sarreysa inkasta oo dadka socotada ah ay weli la kulmaan hubin la’aan badan. Ogosto waxay ku bilaabatay si togan meeshii aan ku soconnay, waxaan gaarnay ku dhawaad ​​700 oo booqde maalin kasta tirooyinkuna waa joogto. Dalxiiska Seychelles ayaa filaya tirooyin rajo leh bilaha soo socda. Waxaan haynaa wadadii aan ku gaari lahayn bartilmaameedyada imaanshaha dalxiiska ee 2021. Waxaan ku qanacsanahay in dadaalka kooxdayada suuqgeynta iyo la -hawlgalayaasheena safarka, qeybtii labaad ee sanadka ay hubaal u noqon doonto fursad wanaagsan Seychelles si loo hagaajiyo tirooyinka imaanshaha booqdayaasha iyo kasbashada dalxiiska, ”ayay tiri Mrs. Francis.
Lixda suuq ee ugu sarreeya Seychelles ee sannadka illaa 15ka Ogosto 2021 waa Ruushka oo ay ku sugan yihiin 17,228 oo soo booqday waxaana ku xiga Imaaraadka Carabta (UAE) iyo Israa’iil oo leh 14,178 iyo 7,086 sida ay u kala horreeyaan, Jarmalka oo booqday 5,122, Faransiiska oo booqday 4,276 booqdeyaal iyo ugu dambayntii Sucuudiga Carabta oo ay ku sugan yihiin 3,166 qof oo soo booqday.
Meesha loo socdo ayaa hadda waxaa si joogto ah ugu adeega duulimaadyo joogto ah sagaal shuraako diyaaradeed oo ay ka mid yihiin Emirates Airlines, Qatar Airways, Aeroflot, Etihad Airways, Edelweiss, Ethiopian Airlines, Turkish Airline, Kenya Airways iyo sidoo kale diyaaradeeda qaran Air Seychelles.